Finiavana Hanatsara Ny Tahirin’ny Maha-izy Azy: Tovovavy Peroviana Ao Italia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2015 6:51 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español
Tamin'ny zavatra niainany sy ny traikefa azony, miaina ny fifamahofahoan'ny dingana tsy misy farany amin'ny fananganana ny maha-izy ny tena i Cynthia : “Ho ahy, efa zava-tsarotra ny fampivadiana teny roa, firenena roa. Manoratra amin'ny teny Italiana aho, saingy misaina amin'ny teny Espaniola. Rehefa alavirina ny andavanandrom-piainana, hita mazava kokoa ny fomba fiovan'ny zavatra rehetra.”
Ity no fihaonana faha-efatra amin'ilay andianà antsafa itrandrahana ireo zavatra iainan'ny Amerikàna Latina izay mandao ny firenena niaviany hikatsaka fomba fiaina vaovao sy hafa, izay azonareo vakiana ato. Navoaka voalohany tao amin'ny biloagin'i Ana ity antsafa manaraka ity, ary ao anatin'ny tovana amin'io bilaogy io natokana ho an'ny antsafa. Ao anatin'ity lahatsoratra ity i Ana Hernández dia miresaka amin'i Cynthia Lizeth Ramos, tovovavy Peroviana izay nandritry ny roapolo taona no mivelona ivelan'ny Amerika Atsimo. Mamaritra ny tenany ho avy any ‘Pro’ anefa izy, toerana nahazoany izay maha-izy azy rehetra, fototr'ilay ‘izy’ ankehitriny.
29 taona i Cynthia Lizeth Ramos ary efa roapolo taona izao no nandao an'i Pero. Teraka tao Trujillo, toerana nipetrahany hatramin'ny fahasivy taonany. Niova daholo ny zavatra rehetra rehefa injay izy nentin'ny reniny honina any Italia. Tonga mitsidika tsara ihany izy isantaona nandritra ireo taona maro ireo, saingy tsy mbola nahita mihitsy an'i Lima na ny Machu Picchu, na dia ao an-tsainy aza ny hoe toerana ho akaiky azy mandrakariva ireo. Taorian'ireo taona maro nahalavitra azy, toy ny Italiana rehetra dia mandrefy ny elanelan-tany i Cynthia. Araka izany, ny elanelana misy amin'i Rôma sy Venizy dia mitovy amin'ny elanelan'i Lima sy Trujillo. Manana zompirenena roa i Cynthia ankehitriny, fiteny iray vaovao sy fo misabàka.
Nahantra izahay. Tsy mba fahazazàna nilalaovana kilalao maoderina no nananako, tsy mba nitombo teo anivon'ny ray sy reny miaraka. Fahabangàna ho ahy ny raiko, satria, zavatra mety hitranga izany, nandao ahy teo amin'ny faha-herintaonako izy. Tsy maintsy nandeha nankany Italia ny reniko satria tsy nanana fahafahana hahazo asa tao Pero. Nitombo teo ambany fitaizan'ny renibeko aho, izay nanome ahy ny soatoavina rehetra ananako amin'izao fotoana izao. Sady koai, na teo aza ireo taona marobe laniko tany lavitra tany, Peroviana aho, tànako ary ampiasaiko foana ny fakà maha-izaho ahy, isanandro, satria manana ny soatoaviko aho. Ny ohatra ananako dia izay nomen'ny renibeko ahy, dia ny ho olona tsotra, tia miasa ary indrindra hanana fo misokatra amin'ireo teojavatra rehetra, ratsy na tsara, miseho eo amin'ny fiainana.
Amafisin'i Cynthia fa ny fandaozany ny renibeny no tena sarotra indrindra taminy. Kanefa, lazainy ihany koa fa izay rehetra hainy tamin'io fotoana io dia hijanona mandrakizay eo amin'ny fiainany. Mijery ny lafintsaran'ny fiainana nandritra izay taona rehetra izay, tsy azony lavina ankehitriny fa na avy lavitra aza, tsy afaka ny nanangona sy nahazo ireo zavatra hafa mampiavaka azy izy raha nijanona tany a,in'ny firenena nahaterahany. Ambarany fa manana saina sy fanahy misokatra kokoa izy izao :
Matetika, gaga aho satria ampitahaiko amin'ireo fomba fihevitro ny an'ireo tanora mitovy taona amiko, ary voamariko fa tena samihafa. Samihafa ny toetsaina, mba tsy hitenenana hoe taraiky, satria mivoatra isantaona i Pero nefa dia misy fahasamihafàna betsaka.
Taorian'i Italia, any Bristol, Angletera ankehitriny no iainana ireo zavatra nolalovan'ity tovovavy Peroviana ity :
Ny zotram-piainako dia finiavana hanatsara ny amiko manokana. Ilay fifikirana amin'ny fitenenana hoe “ity, na izaho aza mahavita azy irery, tsy mila fanampian'ny fianakaviana, ara-bola na ara-tsaina”. Misy ireo fotoana izay, mazava loatra, tahaka ny olombelona rehetra ihany, mihevitra aho hoe “tsy vitako ity, tsy ananako ny fahafahana manao azy”. Kanefa, vitako ihany ny mamadibadika ilay zavatra ary miteny irery hoe : “raha ny olona rehetra manao, azoko atao koa izany ity.”
Nanome bahana an'i Cynthia izay ezaka tsy mitsahatra mikatsaka fihatsaràna izay, mba handaozany an'i Italia sy ny fianakaviany, hahafahana mianatra teny Anglisy. Ny hibeazana no tanjony, tsy hoe amin'ny alàlan'ny fomba matianina fotsiny ho an'ireo fianarana efa nataony momba ny Fifandraisana Iraisampirenena, fa koa amin'ny maha-reny azy any aoriana any :
Tsy maintsy sainina koa ny hoavy. Toa efa hitako izany izaho anivon'ny ankohonana, misy zazakely vitsivitsy. Izany no antony iezahako ho tsaratsara hatrany mba ho afaka ny ho ohatra. Raha tany aloha tsy nahavita afa-tsy ny naneho hatezerana aho noho ny fiaingàn'ny reniko ho any amin'ny firenena hafa, dia mazava ho any ny zavatra rehetra ankehitriny. Tsapako ny hoe ‘Nahoana’ sy ‘Ho amin'inona’. Fantatrao fa ho ataoko koa io. Ho an'ireo zanako.
Apetrak'i Cynthia hifanakalozana hevitra ihany koa ny fomba fananganana ankohonana avy amin'ireo kolontsaina manome ny ampahany amin'ny mah-izy azy amin'izao fotoana izao, ary saintsaininy ny fomba hamoronana fifamatorana sy fananganana fianakaviana :
Ao Amerika Atsimo, andian-taranaka samihafa no miara-miaina sy miara-mandroso. Any aho mahita zavatra izay tsy mbola tsapako mihitsy tany an-toerana hafa. Any Amerika Latina, hitako misy firaisan-tsaina kokoa eny anivon'ny fianakaviana. Na ny fanetrentena izay, any, di amifandray amin'ny fiankinandoha, tsy toy ny ao Italia, izay anorenana fiainan'ny ankohonana mahaleotena kokoa. Misy fitiavantena bebe kokoa ihany koa.”
Na dia tsy manana namana intsony ao Pero aza i Cyntia Ramos, tsy manary ny firenena niaviany izy, ary maka vaovao hatrany amin'ny alàlan'ireo fianakaviany sy ny media toy ny Marca Perú, Perú 21, ary ny gazety El Comercio.
Na izany aza, tohanany mazava tsara fa ny fiverenany any Pero dia tsy ho fitsidihana tsotra fotsiny, indrindra fa noho ilay fifnekena sosialy izay misy any miaraka amin'ny toeran'ny vehivavy :
Heveriko fa tsy hiverina hifankahazatra indray aho. Tena sarotiny be amin'ny azy ireo anadahiko, manome lanja ny kokoa ny lehilahy, ary tsy maintsy mijanona ao an-trano ny vehivavy. Saingy ho ahy, tsy misy intsony izany rehetra izany. Tsy te-hamerina haka an'io aho. Isaky ny mandeha mitsidika any aho, tsy mba afaka nandeha irery nankany afovoan-tanàna. Tsy maintsy nisy lehilahy miara-dàlana amiko hatrany. Tsy mety amiko izany amin'izao fotoana izao, tsy vitako fotsiny tsotra izao.
Kanefa, tsy mbola voafaritra ihany koa ny hoaviny ao Angletera.
Tsy hoe sarotra ny fiainana aty, fa matetika, tsy maintsy mahay miteny Anglisy tsara ianao vao afaka miroso, ary manasarotra ny zavatra rehetra izany ho ahy. Ho ahy, efa zava-tsarotra ny fampivadiana teny roa, firenena roa. Manoratra amin'ny teny Italiana aho, saingy misaina amin'ny teny Espaniola. Rehefa alavirina ny andavanandrom-piainana, hita mazava kokoa ny fomba fiovan'ny zavatra rehetra. Mahita an'i Pero miova aho, saingy tonga saina amin'ny tsy fahampian'ny fitaovana. Tsy ampy ao ny fahafahana manao zavatra izay hita any Eoropa. Na izany aza, na inona na inona, dingana samihafa no lalovan'ny firenena tsirairay,